प्रदेश नं १ Archives - Page 221 of 320 - Purbeli News
झापा / बिर्तामोडका सुन व्यवसायी साजन मुखियाको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बिर्तामोड ५ निवासी २१ वर्षीय मामा भान्जा भनिने सुरज चौधरी र बिर्तामोड ३ का २२ वर्षीय राहुल भनिने राजेश साह रहेका छन् । उनीहरुलाई प्रहरीले बिर्तामोडबाटै पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका दुवैजनालाई प्रहरीले जिल्ला अदालत झापामा...
तीन दिने इलाम महोत्सव सम्पन्न
इलाम । सदरमुकाममा खलङ्गा स्थापना भएको दोस्रो शतबार्षिकीको अवसरमा आयोजित तीन दिने इलाम महोत्सव सम्पन्न भएको छ । महोत्सवमा नागरिक अभिनन्दन, साहित्यिक, साँस्कृतिक, खेलकुदका कार्यक्रम साथै विभिन्न अन्तरक्रियात्मका कार्यक्रम भएको थियो । इलामका नागरिक इतिहासविद् युद्धप्रसाद वैद्यलाई रथारोहणसहित विशिष्ठ नागरिकको रुपमा अभिनन्दन गरियो । त्यस्तै इलाम नगरप...
बस्ति बसाउने भन्दै ठगेको अभियोगमा पक्राउ
इटहरी / सुनसरी, गढी गाउँपालिका–२ का मुस्ताक मियाँलाई सर्वसाधारणबाट रकम असुल गरिरहेको अभियोगमा प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ । मियालाई सोही स्थानमा इन्द्रावास वस्ती कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण योजना अघि बढाउने बताउँदै ४२ जनासँग प्रतिपरिवार रु पाँच हजारका दरले रु दुई लाख १० हजार असुल गरिसकेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद चिम...
खाँदबारी । संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका वडा नं. ९ ढुंगेधाराका खड्ग मगरको भीरबाट लडेर मृत्यु भएको छ । उनलाई जिल्ला अस्पताल खाँदबारीबाट थप उपचारका लागि न्यूरो अस्पताल बिराटनगर पु¥याइएको थियो । उपचारको क्रममा सोमबार मगरको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाले जनाएको छ । ३५ वर्षिय मगर आइतबार घाँस काट्ने क्रममा भिरबाट लडेर टाउकोमा गम्भिर चोट ...
५ दिन देखि विप्लव कार्यकर्ताद्धारा वडा कार्यालय बन्द
पाँचखपन । पाँच दिन अघि देखि पाँचखपन नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ का कार्यालयहरु बन्द छन् । वडा अध्यक्षहरुलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले कार्यालय बन्द गर्न धम्की दिए पछि चैत्र २९ गते देखि वडा कार्यालय अनिश्चित कालिन बन्द भएको हो । २९ गते राती विप्लवका कार्यकर्ताले वडा कार्यालय परिसरमा झण्डा गाडेर कार्यालयको साइन बोर्ड समेत लगेको वडा नम्बर ८ ...
उदयपुर / उदयपुर गढी गाउँपालिका–७ मा आइतबार साँझ आगलागी हुँदा दुईघर जलेर नष्ट हुँदा रु २० लाख बराबरको क्षति भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका अनुसार उदयपुर गढी–७ को हस्तबहादुर सार्कीको घरको भान्छा कोठाबाट आइतबार साँझ आगलागी हुँदा हस्तबहादुर र मानध्वज सार्कीको घर जलेर पूर्णरुपमा नष्ट भएको छ । आगलागीबाट दुबै घर जलेर नष्ट हुँदा अन्नपात, लत्ता...
इटहरीकाे बिपि चाैकमा पुरूष मृत अवस्थामा भेटिए
इटहरी । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–६ स्थित बिपी चोक नजिक एक पुरुष मृत अवस्थामा आज बिहान फेला परेका छन् । इटहरीकै रबि फ्रेस हाउसमा कार्यरत दोलखाको तामाकोशी नगरपालिका–७ निवासी अन्दाजी ३० वर्षीय ज्ञानबहादुर सुनवार मृत फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जानकारी दिएको छ । रबि फ्रेस हाउ सञ्चालकका आफन्त रोशन न्यौपानेको घरमा डेरा गरी बस्दै आएका ...
खानेपानीको पाईप चोरीको आरोपमा संस्थाकै अध्यक्ष शंकर बस्नेत पक्राउ
उदयपुर / उदयपुर सदरमुकामस्थित त्रियुगा साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता समिति (संस्था) को पाईप चोरी आरोपमा संस्थाकै अध्यक्ष पक्राउ परेका छन् । आईतबार दिउँसो त्रियुगा नगरपालिका १० बाबरीस्थित खानेपानी आयोजनाको प्रशोधन केन्द्रस्थित गोदाममा राखिएको पाईप २ जना कामदार लगाएर चोरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका कामदारको बयानका आधारमा समितिका अध्यक्ष...
प्रहरी बिरूध बिद्यार्थीद्धारा मसाल जुलुस प्रदर्शन
उदयपुर / युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियु उदयपुरले आफना नेतालाई बिना कारण अमानविय तरिकाले प्रहरीले कुटपिट गरेकोमा संयुक्त रुपमा बिरोध जनाएका छन् । दुवै संगठनले प्रहरी प्रमुख नबराज भट्टले सुनियोजित रुपमा पक्राउ गरि कुटपिट गरेको भन्दै बिरोध जुलुस तथा साँझमा राँके प्रर्दशन गरि कोण सभा गरेको छ । युवा संघ उदयपुरका सदस्य ओम श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणम...
चुलाचुली गाउँपालिकामा बम विष्फोट, भवन क्षतिग्रस्त
इलाम । जिल्लाको दक्षिणी गाउँपालिका चुलाचुलीको भवनमा अज्ञात समूहले बम विष्फोट गराएको छ ।विष्फोटबाट गाउँपालिकाको सभा हल र कार्यपालिकाको बैठक कक्ष पूर्णरुपमा क्षति भएको छ । शनिबार राति ९ बजे कार्यालयमा ठूलो आवाजमा बम विष्फोट भएको थियो । विष्फोटबाट दुईतले भवनका छत भ्वाङ परेको र छानासमेत खसेको कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत छवि खतिवडाले बताए । घटनास...